Wasaaradda Ganacsiga Puntland oo Dhul- ay ku Shaqayso laga Siiyay Gaalkacyo – Radio Daljir
Diseembar 13, 2015 1:13 b 0
Somalia, December 13, 2015-(Daljir)_Wasarada Ganacsiga iyo warshadaha Puntland ayaa sheegtay inay diyaarisay dhamman sharuucdii ganacsiga iyo maal-gashiga kuwaasoo qaarkood la hor geeyay gollaha Baarlaamnka sida uu sheegay wasiirka wasaradaasi.
Cabdiweli Xirsi Cabdulle (Indho-guran) ayaa waraysi uu siiyay Idaacad ku taal Garowe waxa uu ku sheegay sanadkan dhammaadka ah inay wax badan u qabsoontey wasaradiisa ayna filayaan is-badalkooda in dhowaan la arko.
Indho-guran waxa uu sheegay wasaradda ganacsiga in lagu sameeyay dib u ahayn xaga dhismaha gaar ahaan xarunta ay Garowe ka degan tahay iyo Bosaso, sidoo kalena dhul ay wasaraddu degtana laga siiyay magalada Gaalkacyo, waxa kale uu sheegay inay qaateen shaqaale cusub oo waaxyadda wasaradda qaarkood mamulayo.
Sharuucda wasaraddu ku shaqayn karto ayuu sheegay inay dhammaantood diyaarsan yihiin kuwaasoo kala ah Sharciga maalgashiga, sharciga shirkadaha, sharciga wadaaga ganacsiga dowladda iyo ganacsatadda (PPP), siyaasadda ganacsiga iyo weliba sharciga kala xadeynta shirkadaha, dhammaan sharuucdasi ayuu ku sheegay wasiirka ganacsiga inay qayb ka yihiin howl-galadii wasaradda ee sanadkan lagu guulaystey.
Marka laga tago shaqada wasaradda uu ka qabtay wasiirku waxa uu sheegay inay wadaan sidii wadanka maal-galin loogu samayn lahaa isla markasna looga faa’iidaysan lahaa khayraadka ka buuxa, Puntland ayuu sheegay inay nasiib u yeelatay in wax soo saarka khayraadka badda qaarkood ka faa’iidaysato dowladda itoobiya ayna wada shaqayn xagga ganacsiga u dhaxeeyo.
Puntland ayaa ka mid ah meelaha khayraadku ka buuxo, balse aan sidii loogu talo galay looga faa’iidaysan, sidoo kale masuuliyiinta dowladda ayaa tilmaamaya qurba joogtu inay dhulkooda kusoo xiraan shirkadaha ganacsiga caalamiga ah si wax soo saarku u korno.